GOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုရှာဖွေခြင်း - အပိုင်း ၂ | Linux မှ
ဤသည်၌ လေးပိုင်း အကြောင်းကိုဒီစီးရီး၏ «Google Open Source » ကျွန်ုပ်တို့မှဖွင့်လှစ်ထားသည့်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသည့်လျှောက်လွှာများ၏ကျယ်ပြန့်သောတိုးပွားလာသောစာရင်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားပါမည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de «Google ".
စဉ်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ ဒီစီးရီး၏ယခင်3အစိတ်အပိုင်းများ အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။
1 GOS-P4: Google Open Source - အပိုင်း ၁
1.1.2 DeepMind ဓာတ်ခွဲခန်း
GOS-P4: Google Open Source - အပိုင်း ၁
၎င်းသည်အေးဂျင့်အခြေပြု AI (Artificial Intelligence) သုတေသနအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော 3D ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးသော 3D ဂိမ်းကစားခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးယေဘုယျအတုဥာဏ်ရည်နှင့်စက်သင်ယူမှုစနစ်များအားသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နက်ရှိုင်းသောအားဖြည့်သင်ကြားမှုအတွက်အထူးအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်နှင့်ပဟေsolvingိဖြေရှင်းခြင်းအလုပ်များကိုပေးထားသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော API သည်သင့်အားတီထွင်ဖန်တီးမှု AI နှင့်အလုပ်ဒီဇိုင်းများကိုလျင်မြန်စွာစူးစမ်း။ ပုံတူကူးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဂူးဂဲလ်က၎င်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ရန်နှင့်လေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုသည် ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source y GitHub.
၎င်းသည် TensorFlow-based သုတေသနမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအားဖြည့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ algorithms ကိုရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ရိုင်းသောအတွေးအခေါ်များ (မှန်းဆသုတေသန) နှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စမ်းသပ်နိုင်သည့်သေးငယ်။ နားလည်ရလွယ်ကူသော codebase လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံဒီဇိုင်းနိယာမများတွင်အသုံးပြုသူအသစ်များအနေဖြင့်ရည်ညွှန်းထားသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ရလဒ်များကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းရရှိသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source y GitHub.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤစတုတ္ထတူးဖော်ရေးအပေါ် «Google Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Google»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁